यौन सम्बन्धमा महिलाले चरमसुख प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ? - Gokarna News from Nepal
यौन सम्बन्धमा महिलाले चरमसुख प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
मङ्गलबार, बैशाख ३०, २०७७ by गोकर्ण न्युज
एजेन्सी – लामो समयदेखि परिचितसँग आफ्नो यौन चाहना खुलस्त भन्न सकिने र आफ्नो आवश्यकता निर्धक्क व्यक्त गर्न सक्ने हुन्छ। नयाँ पार्टनरसँगको सम्बन्ध कौतूहलमा त होला तर यौन उत्तेजनामा आउनै समय लाग्न सक्छ। त्यस्तो यौन सम्बन्धमा चरमसुख प्राप्त होला भन्नेमा शंकै हुन्छ। परिचित र सहयोगी पार्टनरबीच यौन क्रियासँगै छिट्टै चरमसुख प्राप्त हुन्छ।
शारीरिक व्यायामको क्रममा तल्लो पेट, पुट्ठा अनि जननेन्द्रिय वरिपरिका मांसपेशी कसिलो भएको खण्डमा चर’मसुखमा पुग्ने क्षमता वृद्धि
‘द जर्नल सेक्सुअल मेडिसिनका अनुसार योगाभ्यास तथा मन शान्त राख्न सक्ने क्रियाकलापले यौन चाहना बढाउन, यौन उत्तेजना बढाउन र अधिक चरमसुख प्राप्त गर्न सघाउँछ। योगाभ्यास अथवा शारीरिक व्यायामको क्रममा तल्लो पेट, पुट्ठा अनि जननेन्द्रिय वरिपरिका मांसपेशी कसिलो भएको खण्डमा चरमसुखमा पुग्ने क्षमता वृद्धि आउँछ। योग अभ्यासले डिप्रेसन र चिन्ता पनि कम गराई यौन उत्तेजनाको कमीको समस्या पनि हटाउँछ।
‘अर्काइभ अफ सेक्सुअल बिह्याभियरका अनुसार प्रायः महिला चरमसुखका क्रममा चिच्याउने,कराउने गर्दैनन्। पुरुष चाहिँ वीर्य स्खलन हुँदा वा चरमसुखमा पुग्दा सम्भवतः यौन आनन्द प्रकट वा प्रदर्शन गर्न कराउने गर्छन्। यौन सम्पर्कका बेला दुवै पार्टनरले हल्का आवाज निकाल्दा यौन उत्तेजना बढाउन र चरमसुख प्राप्त गर्न मद्दत मिल्छ।
महिला पार्टनरले नक्कली नै सही चरमसुख पुगैको जस्तो गरी अभिनय गरेमा बढ्ता यौन आनन्द पाउन सघाउँछ
यसको मतलब पोर्नस्टारले जस्तै कृत्रिम आवाज निकाल्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्तो आवाज साधारणतः प्राकृतिक देखिने हुनुपर्छ। महिला पार्टनरले नक्कली नै सही चरमसुख पुगैको जस्तो गरी अभिनय गरेमा बढ्ता यौन आनन्द पाउन सघाउँछ। नक्कल गलत हो तर कतिपय बेला हल्का बढाइचढाइ गरेको खण्डमा आफ्नै दिमाग पनि रनभुल्लमा परेर बढ्ता आनन्द लिन बल पुग्छ।
अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार महिलामा यौन दिमागबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले महिला पार्टनरको दिमागमा नकारात्मक सोचले डेरा जमाएको छ भने चरमसुखमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि, पुरुष पार्टनरको बेडरुममा पढ्ने, लेख्ने कार्यबाट महिला पार्टनर आजित छन् भने उनीहरूमा बेडरुमप्रति नै नकारात्मक सोच पलाउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा कतिपय महिलाले बेडरुमको ठाउँमा अन्यत्र यौन सम्बन्ध राख्दा बढ्ता मज्जा आएको महसुस गर्छन्।
त्यसैले पनि बेडरुम केवल सेक्स र शयनका लागि हुनु राम्रो हुन्छ। कतिपय महिला खाइलाग्दो जीउडालको पुरुष पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध राख्दा चरमसुख पाएको अनुभूति गर्छन्। चरमसुख प्राप्त गर्ने मामिलामा सधैँभरि सही नहुन सक्छ। अध्ययनअनुसार महिलामा चरमसुखसँगै योनिको वीर्य ग्रहण गर्ने क्षमता बढी हुन्छ।
चरमसुख यौन उत्तेजनाको घनीभूत अवस्था मात्र हो। अमेरिकी सेक्स थेरापिस्ट म्याडेलिन एम कास्टेलानोसका अनुसार चरमसुखका बेला योनिमार्ग र गुदद्वारका मांसपेशीमा पटक–पटकको खुम्च्याइ अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर, शरीरभरि पनि केही नौलो कुरा भइरहेजस्तो महसुस हुन्छ। यौन क्रियाका क्रममा अधिकतर तल (जननेन्द्रिय) मा के भइरहेको छ भन्ने हेक्का भइरहे पनि रमाइलो अनुभूतिसँगै अन्य शारीरिक अंगले पनि अनौठो प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छन्।
चरमसुखमा पुग्न मस्तिष्कका ३० ठाउँले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। मस्तिष्कको अघिल्लो भागले यौनबारे सोच्ने, परिकल्पना गर्ने, यौनिक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, लाज प्रकट गर्ने तथा अमिग्डालाले यौनसम्बन्धी सूचनालाई परिष्कृत गर्ने गर्छ भने हाइपोथालामसले अक्सिटोसिनजस्ता रमाइलो अनुभूति गराउने रसायन उत्पादन गर्छ।
यौन क्रि’याकलापका बेला स्तनको मुन्टा छुँदा यौनका दृष्टिले अति संवेदनशील स्नायुको सन्देश मस्तिष्कमा पुर्‍याउँछ
जसले पाठेघर खुम्च्याउन र आत्मीय अनुभूति दिलाउन मद्दत गर्छ। यौन उत्तेजानासँगै ठूलो हुँदै जाने आँखाको नानी चरमसुख नपुगुञ्जेल ठूलै हुन्छ। यसले पार्टनरलाई थप आकर्षित गर्न र यौन कार्यमा रुचि देखाइरहेको भन्ने विश्वास दिलाउँछ। त्यसै गरी, चरमसुखको उत्कर्षमा मुटुको चाल निकै बढ्छ। यसको कार्यले क्यालोरी (शक्ति) खर्चिन पनि सघाउँछ।
यौन क्रियाकलापका बेला स्तनको मुन्टा छुँदा यौनका दृष्टिले अति संवेदनशील स्नायुको सन्देश मस्तिष्कमा पुर्‍याउँछ भने जननेन्द्रियको सुम्सुम्याहटसँगै सक्रिय हुने मस्तिष्कले स्तनको मुन्टा टिनिक्क टन्किन सघाउँछ। चरमसुखअगाडि शारीरिक मांसपेशी कडा हुने, बूढी औँला खुम्चिने, ढाड टन्किने हुन्छ, जुन चरमसुख प्राप्तिसँगै शिथिल हुन पुग्छन्। यस्तो मांसपेशीको कडापनले यौ’नरस उत्पादन गर्न, स्खलित हुन र चरमसुखमा पुग्न सहयोग गर्छ। यौन क्रियाका बेला रक्तप्रवाहमा वृद्धिसँगै इन्डोर्फिनको उत्पादनले छालामा चमक आउने, गाला र छाला राताम्य हुने हुन्छ।
महिलाको यौन सन्तुष्टि पुरुष लिंगको आकारभन्दा यौन जोडीबीचको प्रेममय क्रीडामा भर पर्छ।
यौन आनन्दमा लिंगको आकारले खासै फरक पार्दैन। लिंग जस्तोसुकै आकारको भए पनि भगांकुरका साथै योनिमार्गको बाहिरतर्फको एकतिहाइ भाग (जी स्पट रहने) को घर्षण हुँदा महिला यौन साथीले बढी यौन सन्तुष्टि पाउँछन्। कतिपय अध्येताले चरमसुखका लागि जी स्पटलाई महत्त्व दिए पनि यसबारे विवाद नै छ।
योनि–लिंगको समागम मात्र भन्दा दुवैले यौन सन्तुष्टि पाउने सम्भोगका लागि यौन क्रियाकलापको क्रममा प्राक्क्रीडालाई धेरै समय दिनुपर्छ
मानिसले चरमसुखको केन्द्रबिन्दु भगांकुरलाई मान्ने गरेका छन्। भगांकुरमा पनि कुन चाहिँ भाग यौनका दृष्टिले बढ्ता संवेदनशील छ भन्ने कुरा पत्ता लगाई सुरुमा हल्का–हल्का दबाब दिँदै, रमाइलोपन बढेसँगै बिस्तारै दबाब बढाउँदे लानु राम्रो हुन्छ। तर, बढ्ता यौन आनन्द प्राप्तिका लागि भगांकुरमा बढ्ता दबाब भने दिनु हुँदैन।
हतारमा यौन कार्य, शीघ्र स्खलनसँगै पुरुष लिंगको शिथिलता, पुरुष यौन साथीको स्वार्थ प्रवृत्ति, आफ्नो यौनेच्छा र सन्तुष्टि व्यक्त नगर्ने कारण धेरै महिलाले चर’मसुख प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। पुरुष यौन साथीद्वारा दमित व्यवहार तथा वैवाहिक अवस्थाभित्रको थुप्रै बाध्यताले आफ्नो इच्छा, चाहना वा सन्तुष्टि व्यक्त गर्न नसक्ने हुन्छ।
एक सर्वेक्षणअनुसार करिब ४३ प्रतिशत महिलाले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेको देखाए पनि यौन क्रियाकलापको क्रममा प्राक्क्रीडालाई जोड दिएको खण्डमा यो संख्या धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। भौतिक रूपमा योनि–लिंगको समागम मात्र भन्दा दुवैले यौन सन्तुष्टि पाउने सम्भोगका लागि यौन क्रियाकलापको क्रममा प्राक्क्रीडालाई धेरै समय दिनुपर्छ।
कोरोनासँगै सलह किराको त्रास,एउटा बथानले एक दिनमा ३५ हजार मानिसलाई दुई छाक पुग्ने खाद्यान्न खाइदिने
आफ्नै छोरीलाई पटक-पटक बलात्कारको प्रयास गर्ने बाबु पक्राउ
बलात्कारको आरोप लागेका पूर्व डिएसपी खिउजु कारागार चलान
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
संघीय संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै LIVE
नेपालमा एकै दिन थपिए १५६ कोरोना संक्रमित, सक्रमितको संख्या १ हजार नाघ्यो
बजार मुल्य नपाएपछि चितवनका किसानले तरकारीबारीमै लगाए ट्याक्टर
चौरजहारी घटनामा पाचौं शव भेटियो, एक अझै वेपत्ता
राप्तीमा छाडिएको गोही कलकत्ता नजिकै भेटियो
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै भने- ‘भारतीय सेनाले कालापानी छाडेर जाउन्
नेपाल भारत सीमा विवादबारे राहुल गान्धीले लगाए मोदी सरकारलाई यस्तो गम्भिर आरोप
स्याङ्जासहित २ जिल्लाका ४ जनामा देखियो कोरोना
चौरजहारी मृत्यु प्रकरण: वडाध्यक्षसहित २० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी,१८ जना पक्राउ
नेपालमा एकैदिन १२९ जनामा भेटियो कोरोना,संक्रमित संख्या ९ सय नाघ्यो